Vivo V19 Neo mara ọkwa: Ọkara ntanetị ọhụrụ na gam akporo 10 | Gam akporosis
La Firmlọ ọrụ China dị ndụ i webatara igwe ohuru n’obodo gi akpọ Vivo V19 Neo, a na ekwentị atụle n'etiti-nso n'ihi na ike processor. Ọ na-enwu maka njirimara ọrụ ya, nke a bụ na ọ nwere ike ịbụ ama chọrọ ka ọ pụọ na ụbọchị ndị na-abịanụ.
Ọ na-aga na peeji nke onye nrụpụta na-egosi ihe niile n'ụzọ zuru ezu, ọbụnadị na-egosi nke ahụ Ọ nwere akara mkpisiaka n'okpuru panel, otu n'ime ndị kasị mma họọrọ na ekwentị. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - abịa na ngwugwu omenala n'okpuru usoro gam akporo kachasị ọhụrụ mgbe ewepụrụ ya na igbe ahụ.
1 Vivo V19 Neo, atụmatụ ya niile
Vivo V19 Neo, atụmatụ ya niile
Ana m ebi V19 Neo bu ihe ozo di iche nke Vivo V19 Pro, ma ọ na-abịakwa na mkpali nke ịnọ na elu nke ahịrị Vivo X50. Ọ bụ ngwaọrụ nke ga-enwe nnukwu ọrụ ịbanye na Philippines siri ike, na mba ahụ nke ga-abata na mbụ n'izu na-abịanụ na ọnụahịa dị oke ala.
Ọ nwere ihuenyo 6,44 nke anụ ọhịa ahụ nke Super AMOLED Ultra O ụdị nwere mkpebi zuru ezu HD + na onye na-agụ akara mkpisiaka jikọtara n'okpuru panel. E kpebiri ịkwado ihe nhazi Snapdragon 675, 8 GB nke RAM, 128 GB nke nchekwa ma tinye batrị 4.500 mAh na ikike 18W na-akwụ ụgwọ.
Njirimara nhazi igwefoto LNa-amalite site na ihe mmetụta 48 MP, nke abụọ bụ oghere 8 MP dị oke obosara, macro 2 MP, na ihe mmetụta miri emi nke 2 MP. Igwefoto selfie bụ 32 MP nwere ụdị abụọ iji nweta ihe kacha mma na ya. Ọ bụ 4G ọnụ n'ihi ya CPU, na mgbakwunye na inwe Wi-Fi Njikọta, Bluetooth, GPS, n'etiti ndị ọzọ Njikọta. Sọftụwia ahụ bụ Android 10 nwere Funtouch OS 10 oyi akwa.
Ana m ebi V19 Neo
IKIRU 6.44-inch Super AMOLED Ultra O na mkpebi HD zuru oke
Nhazi Octa-isi Snapdragon 675
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 32 MP na Super Night na Super Night Selfie mode
OS Gam akporo 10 na Funtouch OS 10
Njikọ 4G - Wi-Fi - Bluetooth - GPS
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihuenyo akara mkpisiaka
El Ana m ebi V19 Neo Oruolarị iwu tupu peeji nke onye nrụpụta maka ọnụahịa nke PHP17,999 (ihe dị ka euro 320 na mgbanwe ahụ). Ọ na-abịa na agba abụọ: Admiral Blue na Crystal White.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Vivo V19 Neo mara ọkwa: Ọkara ntanetị ọhụrụ na gam akporo 10